Fetim-pirenena mendrika | NewsMada
Par Taratra sur 25/06/2020
Miarahaba ny isan-tokantrano amin’izao fankalazana ny tsingerin-taonan’ny Fahaleovantenam- pirenena izao. 60 taona! Zava-dehibe, tsy azo dinganina. Na ao anatin’ny hamehana ara-pahasalamana aza ny firenena amin’izao, atao mendrika sy sahaza azy ny lanonana sy hetsika isan-karazany.
Ho ao anatin’ny fifaliana tanteraka; eny, na isan-tokantrano aza no tena anaovana izany. Tsy misy ny hetsika iombonambe afa-tsy ny matson’ny Foloalindahy eny amin’ny Araben’ny Fahaleovantena, Analakely, hampitaina mivantana amin’ny haino aman-jery manerana an’i Madagasikara.
Hitondra inona izay fahatsiarovana izay ao anatin’izao fotoan-tsarotra izao? Na eo amin’ny isam-batan’olona izany, na ny isan-tokantrano, na ny firenena… Latsaka anaty sy lalina kokoa ny fahatsiarovana rehefa tsy sarona na difotry ny fihetsiketsehana ivelany toy ny mahazatra hatramin’izay?
Ao anatin’ny tsy fahafaha-manoatra sy tsy fidiny izao. Izay no tena ahatsiarovana ny tanindrazana iombonana ao anaty, iombonana aina ihany koa. Izao vanim-potoana izao no tena tokony hampiray fo ny Malagasy tsivakivolo, fa mbola ady fiady hatrany ny hoe Fahaleovantena.
Hatramin’izao, mbola mahabe ady hevitra etsy sy eroa ny hoe fahaleovantena ara-politika, ohatra: ny vahiny no mibaiko ankolaka na mivantana, te hametraka ny olony na izay azony baikoina ho amin’ny tombontsoany? Hatramin’izao, tsy mbola zakaina tsy anombinana aza i Madagasikara.
Vao mainka fa ny hoe fahaleovantena ara-toekarena. Izay aza no tena mahatonga ny famoretana ara-politika. Mbola ady fiady… Ny tsy firaisankina eo amin’ny samy Malagasy no mampahazo vahana hatrany ny zarazarao hanjakana? Mbola mandaitra, tsy tsarotsaroana, tsy mahafa-bela…
Mila ainga vaovao ny fahatsiarovana ny Fahaleovantenam-pirenena amin’izao fotoan-tsarotra izao: firaisam-po sy firaisan-tsaina, tena ho an’ny tanindrazana iombonana sy mampiombona. Ho marina sy ho mendrika ny filamatra hoe: “Madagasikara tanindrazako, fiainako, lovako.” Tsy handalo fotsiny.